Kurambidzwa kweQT kwatotanga uye Qt 5.15 kodhi yekodhi haichasvikike | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Updated on 07/01/2021 02:10 | Noticias
Mwedzi yakati wandei yapfuura isu tinogovana nhau pano pa blog nezve sarudzo yavainge vaita mukati kubva kuQt Kambani nezvekuita shanduko kune avo marezinesi mamodheru uye kuti ivo vakazivisa kuti iyo Qt-refu-rutsigiro edition inongowanikwa chete mune zvekutengesera marezinesi, mukuwedzera pakurambidza kuwana chirongwa mune imwe nzira kana imwe.
Uye ndezvekuti sekudaro zvakataurwa izvozvo nharaunda inongokwanisa chete kuwana shanduro nyowani dzeQt gore rimwe chete mushure mekuburitswa chaiyo (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvayo nezve katsamba, unogona kutarisa kubhuku Mune inotevera chinongedzo).
Zvakanaka, ikozvino mushure menguva iyoyo yapfuura kubva munhau kusvika parinhasi, zvinorambidzwa zveQt Kambani zvakatotanga uye ndizvo Tuukka turunen, Development Director weQt Kambani, achangobva kuzivisa mukana wekuwana kunzvimbo yekuchengetera bazi reQt 5.15 LTS, vhezheni yakangoburitswa munaKurume apfuura uye kuburitswa kwekutanga kwechitoro-chete Qt 5.15.3 LTS chigamba chakarongerwa kuburitswa muna Kukadzi.
Iine Qt 6.0.0 yakaburitswa uye yekutanga chigamba vhezheni (Qt 6.0.1) iri kuuya munguva pfupi, inguva yekupinda yekutengesa-chete chikamu cheLTS cheQt 5.15 LTS.
Matavi ese aripo 5.15 anoramba achionekwa pachena, asi akavharirwa zviitwa zvitsva (uye nesarudzo).
Iyo yakasara ndeye Qt WebEngine (uye yakadzora Qt script), iyo ine yechitatu-bato LGPL kutsamira.
Mushure meizvi, sarudzo dzinoenda kune imwe nzvimbo inongowanikwa kune vezinesi vekutengesa chete.
Isu ticharonga kuwana kune iyo repository yevanotengesa marezinesi varidzi, saka kuwedzera kune zviri pamutemo vhezheni, zvinokwanisika kushandisa mareti. Mirairo pane izvi ichawanikwa kune vane rezinesi rebhizinesi mukati mevhiki rinouya, mushure mekupedza shanduko yelayisensi uye kumwe kugadzirira.
Tinogona kuronga kupinda kwevekunze module vanochengeta kune vekutengesa-chete marekodhi.
Iyo yekumisikidza yakaunzwa maererano nechirongwa yakaziviswa gore rapfuura, iro rinosanganisira kuburitswa pachena kweiyo kodhi yekuchinja kumatavi eLTS chete isati yaumbwa kweinotevera kuburitswa kwakakosha.
Uye ndezvekuti mavhiki mashoma apfuura kuburitswa kweQt 6.0 kwakaumbwa, kodhi yayo inoramba iripo uye kuburitswa kwekutanga kugadzirisa kugadzirisa 6.0.1 kunotarisirwa mumazuva anotevera.
Asi kubva nhasi (Ndira 5) varidzi chete verezinesi rekutengesa ndivo vanozokwanisa kuwana iyo kodhi ine inogadziridza yeQt vhezheni 5.15.
Kunyangwe zvataurwa izvozvo Kuwanika kweruzhinji kune ese mavhezheni eQt 5.15 kuchachengetwa rakaburitswa kare, asi zvisimbiso zvitsva zvichawedzerwa kuseri kwemikova yakavharwa. Iko kusarudzika kunoitirwa chete kodhi yeiyo Qt WebEngine uye Qt script mamodule, ayo akabatanidzwa kune ekunze kutsamira pasi peLGPL rezinesi.
Chikwata cheQt 5.15.3 chakarongerwa kuburitswa muna Kukadzi kune vashandisi vebhizinesi chete. Iyo Qt Kambani yaratidza kuda kwayo, pachikumbiro chakasiyana, chekupa vekunze Qt module vanochengetedza mukana wekuwana kune zvakavanzika zvinyorwa, izvo zvinopa vagari vemunharaunda mukana wekucherechedza shanduko muQt 5.15 LTS.
Kugadziriswa kwezvipenga uye kusagadzikana kunogona zvakare kuiswa kubva kubazi rekuvandudzakana mune izvo zvinyorwa zvitsva zveQt zvinogadzirwa. Semutemo wakajairika, zvigamba zvinoonekwa kutanga pabazi rino, mushure mezvo zvinobva zvaendeswa kumatavi ane shanduro dzakagadzikana
Tsigiro yebazi rapfuura reLTS Qt 5.12 ichagara kusvika kupera kwa2021. Kugoverwa kunoda kutumira mapakeji neQt 5.15 kunomanikidzwa kuchengeta iro bazi pachavo kana kuchinjira kubazi reQt 6, izvo hazvivimbise kuzara kuzere neQt. 5.
Qt vanochengeta paDebian vataura kare izvozvo havazove nenguva yakakwana yekutsigira Qt 6 mukugovera. Nharaunda iri kukurukura nezvekugadzirwa kwechirongwa chakabatana kuronga rutsigiro rwemapazi avo eLTS eQt, yakazvimiririra yeKt Kambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kurambidzwa kweQT kwatotanga uye Qt 5.15 kodhi yekodhi haichakwanisike
Uye, ndizvozvo. Izvo zvakanaka hazvigone kuve zvemahara nekuti zvinonetsa kukudziridza.